Iyo Zvishandiso neApplication izvo Zvinondichengeta Mune Bhizinesi | Martech Zone
China, December 24, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Mwedzi mitanhatu yekupedzisira yanga ichinetsa sezvo ini ndatanga bhizinesi rangu ndega. Dambudziko rakakura ndere kubuda kwemari… unokurumidza kuona kuti kunyangwe uchishanda nesimba, mari haidi kuyerera pamusuwo. Nekuda kweizvozvo, ndiri kumhanya kuonda uye zvine huso. Ini handina kana kumbotenga chaizvo nzvimbo yemahofisi panguva ino.
Ini ndaifunga kuti ndichagovana kuparara kwemidziyo yangu yekutengesa. Ini handina chero chakakosha uye ndinonyatso shandira kuchengetedza mitengo yakaderera sezvinobvira.
Macbookpro - Ini handina chazvino, asi ichi ndicho chokwadi injini yangu yebasa. Ini ndinoshuva dai ndaive nemhando nyowani, asi ndiri kubvisa mari kwechinguva. Yangu Mac inomhanya neLeopard zvine hunyanzvi asi inosungira hombe yechipiri yekutarisa uye inosvika pakumhara. Iyi ndiyo ichava mari yangu hombe muna 2010 apo ini ndinotarisa kusimudzira.
Yakawedzera tambo yeMacBookPro yangu - yega yega laptop inofanirwa kuuya netambo mbiri kana mbiri… imwe yekubva kubasa uye imwe yekuchengeta muhomwe yako! Nguva!
Western Dhijitari 250Gb USB Dhiraivha - ichi ndicho changu chekutanga chengetedzo yemutengi data, iyo ini zvakare backup online. Ndingafarirewo kuwana Nguva Capsule yehofisi yekumba.
Blackberry 8330 - ndatenda Adam yekukurudzira iyi foni. Hafu uropi hwangu huri mune iyi foni. Inoenderana ne Google Apps, ine kamera, Evernote, Twitter, Facebook uye kunyangwe Foursquare izvozvi pariri.
Flip Mino HD - kuwana mavhidhiyo mavhidhiyo kunonetsa kune mukomana anonyora zvakanyanya, asi iyi ndiyo yekupedzisira HD kamera yebasa racho! Yakasanganiswa ne iMovie uye Camtasia yeMac - kugadzira mafirimu hakugone kuve nyore.
Maikorofoni yeBlue Snowflake - Ini ndanyora zvakati wandei mharidzo uye zvakarekodhwa zvakarekodhwa neiyi mic uye zvinonakidza. Kure zvirinani kupfuura default laptop maikorofoni!
Sony Earbuds - inosanganiswa ne Pandora's desktop widget (yakabhadharwa sevhisi), haugone kuenda zvisizvo neizvi. Ivo vanodzima zvese.
Ogio bhegi rekutakura kubva kumaBags. Chikwama ichi (Hip Hop modhi) hachina kupfupika ... Ini ndinoshuvira kuti mabhandi epafudzi ave neanosvetuka, zvakadaro.
iPod Touch - Ndichiri kuzotamba neese maapp, vakomana. Ini ndinogona kupa iyi kune vana uye ndiwane modhi nyowani, hazvo… bhiri anondiudza kuti iwo matsva ane mamaikorofoni akavakirwa mukati!
Mabhuku matsva - Zvese zvemutengi zvangu zvekubhadhara zvinoitika neFreshbook. Ini zvino ndine dzimwe shamwari mbiri dzirikushandisa… chinhu chinoshamisa Software seSevhisi mhinduro yekugadzirisa vatengi vako.
Dropbox - Parutivi, ichi chave chiri chakanakisa backup online uye faira manejimendi sisitimu yandakashandisa. Yakabatanidzwa zvakananga neese maOSX neWindows ekudhonza nekudonhedza nyore. Ndine toni yeshamwari inoishandisa uye isu tinotamisa makuru mafaira evatengi tichidzoka nekumberi zviri nyore.
Google Apps yeMeyili - mamwe ese maapplication akanaka kuyamwa achienzaniswa neOfisi (ndine hurombo Google), asi Google Apps yakakosha iyo $ 50 / yr pricetag chete yeemail email Kugona kwangu kuwiriranisa uye kubata akawanda emaimeri uye khalendari kunyorera kwakanaka.
My # 1 kunyorera kwa2009 pasina mubvunzo, Tango. Ini ndanga ndichingosangana nemumwe munhu rimwe zuva uyo aitaura nezve kangani ivo vari parunhare uye muemail ndichiyedza kuronga nguva. Tungle inoita kuti ive yakapusa nyore. Inoenderana zvisingaite neGoogle makarenda zvakare - saka chero nguva pandinenge ndine kukanganisa kwekuronga - zvinowanzoitika kuti ini handina kuzvinyora nemazvo.
Tags: muchina wekuburitsascalemugovegoverana mabhatanizvinogovaniswa zvemukati
Yechokwadi-nguva Kodhi Kubatana pamwe neChikwata
Jan 20, 2014 pa 3: 13 AM